Andron’ny Vehivavy sy ny Firaisankina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2017 3:14 GMT
Cafe 84, bilaogera monina ao Iran indray dia mampahafantatra antsika fa nisy ny fihaonambe hafa nokarakaraina tao amin'ny Sampan'ny Lalàna tao amin'ny anjerimanontolon'i Teheran. Nisy ihany koa ny fampiratiana boky. Ny boky momba ny fivarotan-tena, ny ankizy an-dalambe sy ny fangatahana an-dalambe ihany no voaràra.
Shahram Kholdi, bilaogera sady mpampianatra ambony monina any UK indray nanadihady ny lahatsoratr'i Roya Hakakian tao amin'ny gazety Wall Street. Nilaza Ramatoa Hakakian fa tsy misy firaisankina loatra eo amin'ny Iraniana mba hanohanana ireo hetsi-panoherana tahaka ny fitokonan'ny fiara fitateram-bahoaka. Mr.Kholdi nanoratra hoe:
Tsy miombon-kevitra aminy aho hoe tsy nanao zavatra betsaka mihitsy isika. Farafahakeliny tao amin'ny tontolon'ny bilaogy, maro ireo navitrika mba hiantoka fa haparitaka araka izay tratra ny feon'ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka. Indrisy fa voafetra ny taha-pifandraisana ao amin'ny tontolon'ny bilaogy ary tsy azo hitarina. Nanomboka tamin'ny fanovàna ny fitondrana tao Iran tamin'ny Desambra 2005, hatramin'ny lahatsoratr'i Freethoughts Babak Seradjeh’. Eny tokoa, nitati-baovao tao amin'ny Global Voices i Farid Pouya , ary koa tao amin'ny bilaoginy manokana. Ohatra roa fotsiny ireo, fa mbola misy maro hafa.